Ny Nokia 8 dia mandalo fitsapana fiaretana izay tsy hamela anao tsy hiraharaha | Androidsis
Ny Nokia 8 dia mandalo fitsapana fiaretana izay tsy hamela anao tsy hiraharaha
Ny Nokia 8 izao no finday avo lenta tsara indrindra amidin'ny HMD Global ary novokarina ambanin'ny marika Nokia. Tsy manana fifandraisana tsara amin'ny marika taloha intsony izy io, fa finday mendrika ihany izy ireo, indrindra satria mitondra Android.
Vao tsy ela akory izay, ny Nokia 8 dia efa misy amin'ny magazay amin'ny vidiny mirary raha toa ka mandinika ny mombamomba azy isika. Ankoatr'izay dia nandalo fitsapana fiaretana faran'izay mafy izy io ary velona soa aman-tsara. Ary rehefa miteny hoe "tafahoatra" isika dia ny mampiasa lakile, antsy na hery hanandrana hamaky azy. Na dia te hametraka izany ao anatin'izany rehetra izany aza ianao dia tokony ho fantatrao fa ny Nokia 8 dia henjana noho ny finday finday hafa.
Ny horonantsary tamin'ity fitsapana ity dia nakarin'i YouTube tamin'ny JerryRigEverything Any amin'ny farany tafavoaka tsy nisy olana ny Nokia 8. Ny casing metaly dia nanohitra ny fanandramana dubbing, fa ny aluminium dia tsy mifanaraka tsara amin'ny lakile na antsy. Ka raha te hiaro azy amin'ny rangotra ianao dia tsara kokoa raha tsy atao anaty kitapo na paosy mitovy amin'ny lakilanao.
Mora vaky, nefa mora tohina
Ny tena tsy nampoizina dia ny, na dia arovan'ny vera aza Gorilla Glass 5, ny efijery dia tsy manome fiarovana tena tsara amin'ny rangotra. Etsy ankilany, ny kristaly Gorilla Glass dia tsy nahavita niaro finday mihitsy araka ny fampanantenan'ny mpanamboatra azy ireo.
Ny Nokia 8 dia namboarina tany Chine, tantanan'ny HMD Global ary zavatra iray amin'ny "flagship", fa amin'ny vidiny somary ambany ihany.
Algunas de las terminal famaritana Ireto manaraka ireto:
4 GB an'ny RAM
64GB fitehirizana anatiny
Efijery 5.3-inch amin'ny vahaolana Quad HD
Bateria 3.090mAh miaraka amina fiampangana haingana
Rafitra fiasa Android 7.0 Nougat
Na izany aza Nanome toky ny HMD Global fa hanavao ny findainy rehetra ho lasa kinova P (manaraka aorian'ny Android Oreo). Ianao dia afaka vidio eto ny Nokia 8.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Nokia 8 dia mandalo fitsapana fiaretana izay tsy hamela anao tsy hiraharaha
Tsaho Android dia hoy izy:
tia ny pejy
Mamaly ny tsaho Android
Droid sefo dia hoy izy:
Mamaly an'i Droid Boss
ny lahatsoratra toy izao no antony itiavako ny facebook
Ny Telefaona Tena ilaina dia mahazo vola fanatsarana ho an'ny fakantsary